I-SQLALCHEMY DATABASE MIGRATION YEZICELO ZEFLASK ZISEBENZISA IALEMBIC - IBHLOG
I-SQLAlchemy Database Migration yezicelo zeFlask zisebenzisa iAlembic
I-Flask-Migrate lulwandiso olujongana nokufuduka kwedatha ye-SQLAlchemy yezicelo zeFlask zisebenzisa iAlembic. Imisebenzi yedatha ibonelelwa njengempikiswano yomgca wokuyalela phantsi kwe flask db umyalelo.
Faka iFlask-Migrate nge pip:
Lo ngumzekelo wesicelo ophatha ukufuduswa kwedatha ngeFlask-Migrate:
from flask import Flask from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy from flask_migrate import Migrate app = Flask(__name__) app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///app.db' db = SQLAlchemy(app) migrate = Migrate(app, db) class User(db.Model): id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) name = db.Column(db.String(128))
Ngesicelo esingentla ungenza isiseko sedatha okanye wenze ukuba kube nokufuduka ukuba isiseko sedatha sele sikhona ngalo myalelo ulandelayo:
Qaphela ukuba FLASK_APP Umahluko kwimeko-bume kufuneka usetwe ngokwamaxwebhu eFlask kulo myalelo ukuze usebenze. Oku kuyakongeza migrations ulawulo kwisicelo sakho. Imixholo yale folda kufuneka yongezwe kulawulo lwenguqulo kunye nezinye iifayile zomthombo.
Emva koko unokwenza imfuduko yokuqala:
Iskripthi sokufuduka kufuneka siphononongwe kwaye sihlelwe, njengoko i-Alembic okwangoku ingayiboni yonke into oyenzayo kwiimodeli zakho. Ngokukodwa, i-Alembic okwangoku ayikwazi ukufumana izalathiso. Nje ukuba kugqitywe, iskripthi sokufuduka kufuneka songezwe kulawulo lwenguqulo.
Emva koko unokufaka isicelo sokufuduka kwindawo yogcino lwedatha:
Ke ngalo lonke ixesha iimodeli zedatha ziguqula ukuphinda migrate kunye upgrade imiyalelo.
Ukuvumelanisa isiseko sedatha kwenye inkqubo vele uvuselele migrations ulawulo kulawulo lwemithombo kwaye usebenzise upgrade umyalelo.
Ukubona yonke imiyalelo ekhoyo sebenzisa lo myalelo:
yintoni i-rune crypto
Khuphela ikhonkco: Khuphela iKhowudi yoMthombo
Iwebhusayithi esemthethweni: https://github.com/miguelgrinberg/Flask-Migrate
#database #sqlalchemy #flask #python #alembic
ukuba kungenye iipandas
Ungayibuyisela njani kwakhona i-msrm wifi extender
Ungayithenga njani i-flow crypto kwi-usa
incwadi yokubhalela jupyter kwi-ipad
tshintsha i-imeyile ye-verizon ye-password
int64 ukuya kumtya we-golang